किन हुन्छ डिप्रेसन ? तपाई पनि अनिवार्य थाहा पाउनुहोस् यस्तो छ कारण — sancharkendra.com
किन हुन्छ डिप्रेसन ? तपाई पनि अनिवार्य थाहा पाउनुहोस् यस्तो छ कारण
डा. सुनील पौडेल । नेपालमा ठाउँ हेरी ६५ प्रतिशतजति मानिसमा भिटामिन डीको कमी हुने गरेको अध्ययनमा पाइएको छ । भिटामिन डीको कमीले हाडजोर्नीका समस्या निम्तिने सबैलाई थाहा नै छ । भिटामिन डीको कमीले डिप्रेसनसमेत हुनसक्छ ।
भिटामिन डी कम हुने व्यक्तिहरूमा शरीरका विभिन्न ठाउँ तथा हाडजोर्नी दुख्छ, रमाइलो लाग्दैन । निद्रामा गडबडी हुन्छ । मानिस एकाग्र हुन सक्दैन, बिर्सिरहन्छ । तनाव बढ्दै जान्छ । केही गरौं भन्ने शारीरिक र मानसिक इच्छाशक्ति हुँदैन । काम गर्न मन लाग्दैन । नैराश्यता छाउँछ । सुतिरहौं वा बसीमात्र रहौं जस्तो लाग्छ ।
एकोहोरिरहने, ह्याङ हुने जस्ता अस्पष्ट लक्षणले बिरामी तथा डाक्टर दुबैलाई असमञ्जसमा राख्छ । यसैले समयमै रोगको निदान तथा उपचार हुन पाउँंदैन । थुप्रै बिरामी एक डाक्टरदेखि अर्को डाक्टरकहाँं पुग्दासमेत कुनै फाइदा नपाई दु:खैदु:खमा रुमलिइरहेका हुन्छन् । मानसिक रोगका औषधिहरूको जालमा समेत फँस्छन् । केही–केहीमा मरौं–मराैं जस्तो लाग्ने गरेको पनि पाइएको छ । यी सबै मानसिक समस्या भिटामिन डीको कमीले भएकाहुन सक्छन् ।
हुन त भिटामिन डीको कमीले अन्य थुप्रै रोग तथा स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छन् । जस्तै– काँप्ने रोग अर्थात पार्किन्सन्स, बिर्सने रोग अर्थात डिमेन्सिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि । यो भिटामिनको कमीले विभिन्न खालका क्यान्सर लाग्ने सम्भावनासमेत अत्यधिक बढ्न सक्छ भन्ने तथ्य आइरहेका छन् ।
जाम्दा भन्ने जर्नलमा प्रकाशित डब्लिन (आयरल्यान्ड) को ट्रिनिटी कलेजमा गरिएको रिसर्च अनुसार भिटामिन डीको कमीले डिप्रेसन हुने सम्भावना ७५ प्रतिशत बढाउने पाइएको छ । ‘न्यु इङल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन’मा प्रकाशित अनुसन्धान निष्कर्षले पनि यो तथ्य उजागर गरेको छ । ‘जर्नल अफ इन्टर्नल मेडिसिन’ र ‘ब्रिटिस जर्नल अफ साइक्याट्री’मा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार भिटामिन डी र डिप्रेसन, तनावको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । केही अध्ययनले भिटामिन डीले डिप्रेसन कम गर्नसमेत मद्दत गर्नसक्नेदेखाएका छन् ।
आत्महत्याको कारण पनि
डिप्रेसनले कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । यसले पारिवारिक र प्रियजनसंँगको सम्बन्धसमेत बिगार्न सक्छ । डिप्रेसन आत्महत्याको मुख्य कारणसमेत हो । स्वीडेनमा गरिएको सन् २०१४ को अध्ययन अनुसार आत्महत्याको प्रयास गरेका व्यक्तिहरूमा भिटामिन डीको कमी देखिएको थियो ।
डिप्रेसन भएका प्राय: व्यक्तिहरूमा भिटामिन डीको कमी पाइएको छ । गर्भवती आमामा भिटामिन डी कमी भए जन्मने बच्चामा भिटामिन डीको कमीले हुने शारीरिक तथा मानसिक समस्या विकराल रूपमा बढ्ने वैज्ञानिकहरू बताउंँछन् ।
यस्ता बच्चालाई अन्य रोगका साथै तनाव, डिप्रेसन तथा सिजोफ्रेनिया जस्ता कडा मानसिक रोग हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । अर्हस युनिभर्सिटी डेनमार्क र युनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्यान्डमा गरिएका अनुसन्धानले समेत यो कुरालाई प्रमाणित गरेका छन् ।
कसरी डिप्रेसन ?
सेरोटोनिन जस्ता मोनोएमाइन्स खाले बायोकेमिकल पदार्थलाई खुसी पार्ने हर्मोन पनि भनिन्छ । ती पैदा गर्न भिटामिन डी जरुरत पर्ने वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरेका छन् ।
भिटामिन डीको कमीले खुसी बनाउने हर्मोनहरूको दिमागमा कमी हुनगई डिप्रेसन र तनावसमेत बढ्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । घाम ताप्नाले शरीरमा बिटाइन्डोर्फिनहरूको मात्रा बढ्छ । यसले हाम्रो मुड सुधार्छ, स्फुर्ती बढाउंँछ र डिप्रेसन हुन दिँंदैन ।
घाम ताप्नु राम्रो
ताजा अनुसन्धानहरूलाई हेर्ने हो भने भिटामिन डीको कमीले लाग्नसक्ने रोग र रोगका लक्षण ठिक गर्न भिटामिन डीका सप्लिमेन्ट खानुभन्दा खुला छालामा घाम ताप्नु धेरै गुणा प्रभावकारी पाइएको छ । उत्तर अमेरिका र युरोपका मानिसजस्तै हामीले घाम ताप्न लाखौं खर्च गर्नु पर्दैन ।
हाम्रो देशमा बारी, कान्ला र कौसीमै पर्ने घाम जताततै सर्वसुलभ छ । दिउंँसो एकैछिन घाम ताप्नाले वा साताको एकदिन २०–३० मिनेट कपडा खोलेर दिउँंसोको घाम तापे भिटामिन डी प्रशस्तै प्राप्त हुन्छ । भिटामिन डी शरीरमा आपूर्ति भए हाडजोर्नी र माथि उल्लेखित रोगहरूका साथै डिप्रेसन तथा मानसिक रोगबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ ।
गर्भवती महिलाले पनि मजाले ढाडमा घाम तापेर भिटामिन डी आपूर्ति गर्न सक्छन् । नवजात बच्चालाई दिउँंसोको घाममा केही बेर मालिस गर्नाले उसमा भिटामिन डीको मात्रा उत्तम रहन्छ । यसले बच्चामा रोगप्रतिरोध शक्ति उत्तम राख्छ, भविष्यमा डिप्रेसन तथा मानसिक समस्या आउन दिँंदैन, हाडजोर्नी तथा मांसपेशीको विकासमा पनि मद्दत पुग्छ ।
(स्वास्थ्य सम्बन्धि यो महत्वपूर्ण जानकारी कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।)
२०७५ माघ ५ गते प्रकाशित